Maxaad kala socotaa kiiska xildhibaanka bedelay Muudey looga haystay dalka Kenya? - Caasimada Online
Home Warar Maxaad kala socotaa kiiska xildhibaanka bedelay Muudey looga haystay dalka Kenya?
Maxaad kala socotaa kiiska xildhibaanka bedelay Muudey looga haystay dalka Kenya?
Nairobi (Caasimada Online) – Maalintii Arbacada ee ay taariikhdu ku beegneyd 16-ka bisha February, 2022-ka waxaa magaalada Baraawe ka dhacday doorashada kursiga Golaha Shacabka ee HOP145, taasoo uu ku guuleystay Maxamed Cabdalla Axmed.
2016-kii, markii ay Soomaaliya isu diyaarineysay doorashada dowladda uu mudda xileedkeeda gabagabada yahay, Maxamed Cabdalla waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaad ay dowladda Kenya doon dooneysay oo wajahayay eedeymo ku saabsan banki lacago ay ku lumeen.
Taliyihii booliska Kenya ee xilligaas, Joseph Boinnet ayaa amar ku bixiyay in xabsiga loo taxaabo siddeed qof oo ka mid ahaa mas’uuliyiinta bankiyada, kuwaas oo uu ku jiray Maxamed Cabdalla, oo ah xildhibaanka shalay lagu doortay Baraawe.
Mas’uuliyiintaas, oo ka kala socday labada Banki ee National Bank iyo Chase Bank, ayaa loo heystay arrimo la xiriira falal aan sharciga waafaqsaneyn.
Maxamed Cabdalla Axmed waxa uu xilliga eedeyntaas loo jeedinayay ahaa Agaasimaha Waaxda Farsamada Kumbuyuutarrada ee Bankiga National.
Wali ma cadda in kiiskaas uu ilaa hadda socdo iyo in kale. Balse waxaan dib dambe usoo noqonin bankiga Chase oo kiiskaas bartanka uga jiray.
Bishii February ee sanadkii lasoo dhaafay, toddobo qof oo uu ku jiray guddoomiyihii hore ee bankigii burburay ee Chase Bank, Maxamed Khan, ayaa wajahayay dacwado dheeraad ah, sida uu qoray wargeyska Business Daily.